I-Ac fan, i-Ac yokupholisa fan, i-ec fan, i-dc yokupholisa ifeni, iac ac fan yezibane
Umgcini wensimbi yeminwe
Izixhobo zoNyango kunye nezococeko
SD02007 Umgangatho ophezulu 20x20x7mm axail Fan 12V 5 ...
SD09232-1 92mm 12v 24v 48v dc fan iimoto 9232 90 ...
Ihowuliseyili ixabiso 70mm Ec Fan - EC FAN SE17 ...
Ukusebenza okuphezulu kweFan njengeAc-SA18060 ...
Sizimisele ekuphuhliseni, ukuvelisa kunye nokuthengisa ukusebenza okuphezulu, umgangatho onokuthenjwa kunye neemveliso zexabiso lokhuphiswano kubo bonke abathengi bethu.
Iimveliso zethu zigqithile kwizatifikethi zokhuseleko lwamazwe aphesheya kumazwe ahlukeneyo nakwimimandla enje: UL, CUL, TUV, CE, CCC, IP55, ROHS, njl.
Okwangoku, kukho abasebenzi abangaphezulu kwama-200, indawo yezityalo zii-8,000 zeemitha zesikwere, kunye namandla emveliso ngonyaka angama-6,000KPCS.
Ukukhawuleza kuhlala kumamela abathengi bayo kuphuhliso oluqhubekayo, ukwenza izinto ezintsha, kunye nokuphuhlisa iimveliso ezintsha.
I-Shenzhen Speedy Technology Co, Ltd. yasekwa ngo-2003 ngoku ikwiZakhiwo ezi-6, iZonian Industrial Zone, iShahu Village, iPingshan Idolophu, iPingshan District eNtsha, eShenzhen. Umhlangano kunye nomthengisi wentengiso onommandla ongaphezulu kwe-10,000 yeemitha zesikwere kunye nabasebenzi abangaphezulu kwama-400. Ulawulo lwenkampani lupasile ISO-9001 (2008) inkqubo yokuqinisekiswa komgangatho wamazwe aphesheya.
Inkampani igxile ekuveliseni abalandeli be-DC bokupholisa, iifeni zokupholisa i-AC, kunye neeiradiyetha zekhompyuter. Imveliso ilungele izixhobo, oomatshini kunye nezixhobo, i-CPU yekhompyuter, ukuhanjiswa kwamandla kwesisu kunye nekhadi lemizobo elifuna ukusasaza ubushushu okanye umoya ongenisa umoya. Iimveliso zidlulisile iRohs, i-CE, i-UL, i-CUL, i-TUV, i-FCC, i-CCC, i-CQC kunye nezinye izatifikethi, kwaye iimveliso zithunyelwa ekhaya nakumazwe aphesheya.
Ulawulo lomgangatho kunye nophuhliso lwemveliso ziziseko zemodeli yeshishini likaSpeedy. Ukukhawuleza kuhlala kumamela abathengi bayo kuphuhliso oluqhubekayo, ukwenza izinto ezintsha, kunye nokuphuhlisa iimveliso ezintsha. Sisoloko sikulungele ukubonelela ngezona zisombululo zipholileyo kubo bonke abathengi.
Ukusetyenziswa kweshishini kunye nokuhlelwa kwabalandeli bokupholisa kwimizi-mveliso
Kufuneka iqatshelwe ukuba asixoxi ngabalandeli bemizi mveliso yeemveliso ezenziwe (njengokupholisa kunye nokungenisa umoya ...
Inkcazo emfutshane yomlandeli we-EC
Umlandeli we-EC yimveliso entsha kumzi mveliso wabalandeli. Yahlukile kwabanye abalandeli beDC. Ayikwazi kuphela ukusebenzisa unikezelo lwamandla ombane we-DC, kodwa kunye ne-AC yombane p ...
Umahluko phakathi kwe-AC fan kunye ne-DC fan
1.Umgaqo wokusebenza: Umgaqo wokusebenza we fan yokupholisa ye-DC: ngombane we-DC kunye nokufakwa kwe-electromagnetic, amandla ombane ayaguqulwa ...
I-Shenzhen Speedy Technology Co, Ltd.
I-12cm yeAcial Fan, IPlastikhi yeFan Guard, IHvac Fan Puller, I-Metal Grill Fan 80mm yoLinda, 172mm Ac yeziTyhefu, Umgcini wensimbi yensimbi,